သြစီဆင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သြစီဆင်
Posted by phone_kyaw on Feb 21, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
“ခင်ဗျားတို့ ဆိုင်က ဖရက်ရှက်ဆိုတာ ဟုတ်လို့ လား”
ကျနော်က သူတို့ ကို သြစီဆင်လို့ နာမည်ပေးတယ်။ သြစီမှာ ဗမာပြည်လို ဆင်မှ မရှိတာ။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းဝတော့ ခင်ဗျားတို့ က သြစီဆင်လို့ ပြောတော့ အတော်စိတ်ဆိုးသာဗျ။ ပိန်တယ်လို့ ပြောရင် သဘောကျသလားမမေးနဲ့ ။ မကျလည်းနေပါစေ။ နောက်ထပ်ပြီး စိတ်ဆိုးအောင် ဒီလိုပြောတယ်။ အုံးနှောက်ကလည်းက ကျက်အုံးနှောက်။ အလုပ်လုပ်တော့ လိပ်လိုလို့ ပြောတော့ သူတို့ ကျနော့်ကို ဘာပြောတယ်ထင်လဲ။
အမှန်ပြောရရင် ဒီလို သွားလာရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး မြန်ဆန် လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ၉လ လောက် ကြာပြီးမှ တစ်နိုင်ငံ ကနေ တစ်နိုင်ငံ မှာ ပန်းသီးစားလို့ရတယ် ဆိုတာကိုတော့ အတော်လေး အံ့ဩ သွားမိတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမျိုး ဇာတ်လမ်း လေးတွေက ကျွန်မတို့ အတွက် ဗဟုသုတရပါတယ်။
လက်မထောင် သွားပါတယ်။ :-)
ဟီးဟီး … ဒီလိုပါ .. အရီးလတ်ရေ … unit price သတ်မှတ်ဖို့အတွက် …. အရမ်းနည်းနေတာကြောင့် … အိပ်စ်စပို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ .. အင်ပို့လုပ်မ့် နှစ်နိုင်ငံကို … ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်သွားပြီး … ထရန်စပို့တေးရှင့်ချာ့ခ်ျကို … တက်အောင်လုပ်နေလို့ပါ .. ဟီးဟီး
သာမန်အားဖြင့် ခရီးစရိတ်သိပ်မထောင်းတဲ့ ရေကြောင်းလိုင်းနဲ့သွားမယ်ထင်တယ် … အဲ့ဒါကလည်း …. ရန်ကုန်ကနေ ..စင်္ကာပူ… အဲ့ဒီကနေ .. တခြားနိုင်ငံဆို … အလွန်ဆုံးတစ်လလောက်ပဲကြာတယ် … ။ ရန်ကုန်ကနေ ပေါက်ကလမ်းကို သွားလည်း … အတူတူပဲ ကြာချိန်က … ။
လေကြောင်းနဲ့သွားမယ်ဆို … ကာစတန် ကလီးယားရန့် လုပ်ပြီး … တပတ်ဆယ်ရက်ဆိုတာ ..အ လွန်ဆုံးပဲ … ။ ကိုးလလောက်ကြာတယ်ဆိုတာကတော့ ….. နည်းနည်းများနေသလားမသိ … ဘယ်လောက်ပဲ အေးခဲနေအောင် လုပ်ပြီး ထားထား .. ကိုးလအတွင်းမှာ မူလပုံသဏ္ဍန်မပြောင်းဘူးဆိုတာကတော့ … မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် … ။
ဒါပေမဲ့ တခုသတိပြုရမှာက..ပိုးသတ်ဆေးအန္တရာယ်ဘဲ…မစားသုံးခင်ရေနဲ့ စင်စင်ဆေးဘို့ ကရုစိုက်သင့်တယ်..
ဗဟုသုတမဲ့တယ်လို့ ပြောရင်လည်း စိတ်ဆိုးသေးတယ်။ ဒီမှာသာကြည့်တော့…။ သြစီမှာနေတာနော်…။ ရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ပါ။ မျက်လုံးတွေဖွင့်နားတွေစွင့် ဂေဇတ်ရွာထဲမှာတင် လမ်းသလားမနေနဲ့အိတုံ။
အောင်မလေး သောက်ကျိုးနည်း ….
သြစီမှာနေတယ် .. သြစီမှာနေတယ်ဆိုတာချည်းပဲ .. အပ်ကြောင်း ထပ်အောင် ပြောမနေနဲ့ …
ဘာမှ မထူးခြားဘူး … လူကလူပဲ … သြစီမှာနေတဲ့ ရှင်က ဂျိုနဲ့ .. အမြီးအပိုပါနေလျှင်တော့ .. ထူးခြားလျှင် ထူးခြားမှာပေါ့ … ။
ဗဟုသုတရဖို့ထက် …သူများအမြင်ကတ်တောင် ပြောတတ်ဆိုတတ်ပုံတွေတတ်လာဖို့ .. သြစီဝင်ဖို့ ဒုက္ခသည်လုပ်မှပဲ .. ဟဲဟဲ …
သြဇီမှာဘဲ နေနေ၊မဲဇာမှာဘဲနေနေဗျာ။မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းလို အဆင့်ကို(၂)နှစ်ဖြေတာမအောင်တဲ့လူအဖို့ 
သြဇီမှာနေလဲမြန်မာပြည်မှာ သူတောင်းစားလုပ်နေတာလောက် တန်မယ်တော့မထင်ဘူးဗျို့ ။
ဘုန်းကျော်ပြောလိုက်တိုင်း အမြင်ကတ်တယ်ဆိုတဲ့လူဟာ သူ့ မျက်စိက စွေနေလားမသိဘူး။ အလကားနေ အလကား မနာလိုမဖြစ်နဲ့လေ။ နေအုံးဗျာ ..ဒုက္ခသည်ဖြစ်ဖို့ အတွက် ဘယ်လောက် အရည်အချင်း ရှိရလဲဆိုတာကိုလည်း လေ့လာအုံး။ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ နေနေသာ ယူအန်အောင်ဖို့ တောင် မလွယ်တာဗျာ။ ဒုက္ခသည်ဒုက္ခသည်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ လူတွေကို နှိမ်ချင်နေတယ်ထင်ပ။ ကျနော်ဒုက္ခသည်တစ်ယောက်ပါဗျာ။ သူများတွေဒုက္ခသညါဖြစ်ဖို့ အတွက် ငွေသိန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်တယ်ဆိုတာကိုကောသိကြလား။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှာနေပြီး ဘန်ကောက်လောက်တောင်မရောက်ဘူးပဲ အစိုးရပြောတိုင်းယုံပြီး မတွေ့ ဘူးမကြားဘူး မမြင်ဘူးတာတွေ့ ရင် ဝိုင်းပြီးကိုက်တက်ကြတဲ့လူတွေလား။
ဟား ဟား ဟား ဟား .. ရယ်ချင်လိုက်တာ … လိုချင်တဲ့စကားပြောထွက်ဖို့ … ဒီလောက်လွယ်ကူစွာ ရေးနိုင်လိမ့်မယ်မထင်ခဲ့ဘူး … ။
ဒုက္ခသည်ဖြစ်ချင်လွန်းလို့ …အလွယ်လမ်းလိုက်ပြီး… တမင်တောင် ဖန်တီးယူထားတာပဲ …. ဒုက္ခသည်လို့ပြောခံရတာ နာသတဲ့လား … ။ သိပ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀ကို မီးမောင်းထိုးပြတာ .. ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းဘာ .. :cool:
မျောက်ပြပြီး ဆန်တောင်းသလို … အခွင့်ရေး၊ အထောက်ပံ့လိုချင်လို့ ဒုက္ခသည်လုပ်နေတဲ့ လူတွေကို …ဘာကောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ် … ရင်ထဲ အသည်းထဲက လုံးဝကို အထင်မကြီးဘူး … ။
အလုပ်ကိစ္စမရှိပဲ … အပေတေလုပ်ပြီး … ဘန်ကောက်တွေ ယူအန်တွေသွားပြီး ဘာသွားလုပ်ရမှာလဲ … ။ သမာအာဇီဝ လုပ်အားနဲ့ ရထားတဲ့ ပိုက်ဆံ … သူများတွေလို .. အချိုချောင် ရထားတာမဟုတ်တော့လည်း…. အကြောင်းပြချက်တွေ ပေးပြီး .. အလုပ်ကိုဘေးချိတ်ကာ …လိုက်လျား လိုက်လျား … မလုပ်နိုင်ပေါင် … ။
ဒီမယ် မောင်ဘုန်းကျော်မင်းပြောနေတဲ့နိုင်ငံတွေကို အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင် အပျင်းပြေသွားနေနိုင်တယ်။
ပိုပြောလို့ ကြွားတယ်ဖြစ်နေအုံးမယ်။ရွာထဲကို ဆရာသမားများကို ဦးချပါရဲ့ ဗျာ။ဘယ်လောက်ဘဲ
ခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေပြောပြော ဆုတ်ယုတ်နေတာကတော့ ရှိစမြဲဘဲ ငါ့ကောင်ရေ။မင့်မလဲ
ကွာ ခက်လှပီ။ပြောလဲမမှတ်ဘူး။မင့် ဥာဏ်ရည်လေးနဲ့ သနားစရာကွာ။
ပညာသားတွေ ပညာသည်တွေ ပညာတတ်တွေ —
ဖတ်ရသူတွေ မျက်စိကျယ်အောင် လုပ်ကြဇမ်းဘာ–
အော် ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ မဆွေးနွေးတာဘဲ ကောင်းတယ်ဗျို့ ။ဒီလူ အရူးလုပ်တာကျနော်တို့ ခံရပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။